IPHONE အတွက် FILE MANAGER - IOS အတွက် - 2019
IPhone အတွက် file manager
Google က-အကောင့်အားလုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်သတင်းအချက်အလက်ရဲ့ login ပြီးနောက်အညီအမျှရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်သို့မှသာမျိုးစုံပစ္စည်းများမှအသုံးပြုသူများကိုဆကျသှယျဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ လျှောက်လွှာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏ကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါသည်: ဂိမ်းတိုးတက်မှု, မှတ်စုများနှင့်သင်က Google account ကိုဝင်နှင့်သူတို့ကို install လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ applications များပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ညှိအခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာ။ ဤနည်းဥပဒေ BlueStacks သက်ဆိုင်သည်။
ထပ်တူ BlueStacks ချိန်ညှိခြင်း
ပုံမှန်အားဖြင့်, အသုံးပြုသူကိုချက်ချင်း emulator ၏ installation ပြီးနောက် Google ပရိုဖိုင်းဝင်ပေမယ့်အမြဲမရဖြစ်လာတယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးက BlyuStaks အကောင့်များနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအကောင့်အသစ်စတင်သည်နှင့်ယခုကဒေတာထပ်တူ update လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မရှိဘဲဤအချက်အထိအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်လိုသကဲ့သို့, အန်းဒရွိုက် setting များကိုတဆင့်အကောင့်တစ်ခုပေါင်းထည့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပင် BlueStacks အတွက် logging ပြီးနောက်, အားလုံးမဟုတ် applications များသင့်အခြားစက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ဖြစ်ကြောင်း installed ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းကိုချက်ချင်းရကျိုးနပ်။ သူတို့က Google ထံမှကိုယ်တိုင် install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် Store မှာ Play နှင့်အချို့သော application ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုဖော်ပြရန်နိုင်မှသာလျှင် - ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျကိုသူတို့ရပ်တန့်ဘယ်မှာတူညီတဲ့အဆင့်ကနေသွားတာဂိမ်းကိုစတင်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, synchronize လုပ်ပေးတဲ့နေရာအရပ်ကိုယ်နှိုက်ယူနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များအားဖြင့်သင်တို့ကိုကယ်တင်ပြီးခဲ့သည့်နှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မည်အခါတိုင်းသမရိုးကျဂိမ်းဝင်။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ emulator ပြီးသားသင်ထည့်သွင်းကြောင်းပေး, သင့် Google အကောင့်ကိုချိတ်ဆက်ရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ မဟုတ်ခဲ့လျှင်နှင့်သင်ရုံ BlyuStaks reinstall / install လုပ်ချင်အောက်ကလင့်ခ်ပေါ်ဤအကြောင်းဆောင်းပါးတွေကိုထွက်စစ်ဆေးပါ။ အဲဒီမှာသင်က Google-အကောင့်ကိုဆက်သွယ်ထားသောအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
လုံးဝကိုကွန်ပျူတာထဲကနေ emulator BlueStacks Remove
BlueStacks install လုပ်နည်း
ဤညွှန်ကြားချက်သုံးစွဲဖို့အဆိုပြု, BlueStacks တည်ထောင်ခဲ့ပြီးပရိုဖိုင်းကိုချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သောသူအပေါင်းတို့သည်အခြားအသုံးပြုသူများ:
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုစတင်ရန်, Desktop ပေါ်မှာ click နှိပ် "နောက်ထပ် Applications ကို" နှင့်ကိုသွား "ဆက်တင်များကို Android ».
မီနူးစာရင်း မှစ. , အပိုင်းကိုဖွင့် "Accounts ကို".
အဲဒီမှာအဟောင်းအကောင့်ဖြစ်, သို့မဟုတ်တဦးတည်း၏အပင်မရှိခြင်းလိမ့်မည်။ တစ်ခုခုကိုကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အကောင့် Add".
စာရင်းထဲက Choose « Google က».
အဆိုပါဖွင့်ပါ box ထဲမှာ, သင်သည်သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်အသုံးပြုသင့်အီးမေးလ်လိပ်စာရိုက်ထည့်ပါ။
နောက်ဆုံးအဆင့်မှာပေါ်မှာစွန့်ခွာသို့မဟုတ် Google Drive ကိုနှင့်ကလစ်နှိပ်မှဒေတာများတက်ကိုဖွင့် "လက်ခံပါသည်".
ကျနော်တို့ကဆက်ပြောသည် Google က-အကောင့်မြင်အထံတော်သို့သွားပါ။
ဒီနေရာတွင်ထိုကဲ့သို့သော Google ကြံ့ခိုင်မှုသို့မဟုတ်ပြက္ခဒိန်အဖြစ်မလိုအပ်တဲ့ကို disable အားဖြင့်ညှိခြင်းကိုခံရလတံ့သောအရာကို configure လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သုံးစက်နှင့်အတူ button ကို click ဖို့အနာဂတ်အတွက်လိုအပ်ပါ။
ဒီ menu ကတဆင့်, သင်ကိုလည်းဥပမာနေ့စွဲထဲကမဆိုတခြားအကောင့်ကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာဖြစ်လျှင်, Play စတိုးကိုသွားလိုချင်သော application ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါက run နှင့်၎င်း၏အချက်အလက်များ၏အားလုံးအလိုအလြောကျ load ရမည်ဖြစ်သည်မှနေဆဲဖြစ်သည်။
ယခုတွင်သင်သည် BlueStacks အတွက် applications များတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုသိသော။
ဗီဒီယို Watch: ios အတက. u200b Facebook. Youtube မ ဒငနည သမနညဆဝဒငရန Description (နိုဝင်ဘာလ 2019).